ချစ်သူကောင်မလေးက သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံနေတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်
August 18, 2019 Thuta Star 0
ချစ်သူကောင်မလေးကိုသွားခေါ်စဉ် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံနေတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ် August 18, 2019 နိုင်ငံတကာသတင်း ကိုယ့်ချစ်သူက အခြားသူ တစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံနေတာကို လက်ပူးလက်ကြပ် မြင်လိုက်ရတယ်ဆို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ၊ လမ်းခွဲလိုက်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မှာလား။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အမည်မဖော် အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ အရက်ဆိုင်မှာ သူ့ရဲ့ […]
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၈)ချက်..
သင် ဒါတွေ သိပါသလား။ ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆင်ခြင်ပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရော၊ မိသားစု နှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကို လည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါ …. ။ (၁) ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်း သည် […]
လာဘ်ပွင့်ချင်ပါသလား ? သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက လာဘ်ပိတ်စေတဲ့ ဤအရာတွေအမြန်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ…
မိမိအသုံးပြု​နေတဲ့ ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာ မလိုအပ်​တဲ့အရာ​တွေထည့်​ထားမိတဲ့အခါ မ​ကောင်းတဲစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​ပေါ်တတ်​ပါတယ်​။ ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်​မယ်​။ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ် လာဘ ပိတ် တာတွေ။ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ထို့အတူ​ကောင်း​သောစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​စေတတ်​သည့်​အရာ​တွေကို သင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာထည့်​ထားခဲ့မည်​ဆိုလျှင်​ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလို ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ – ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ […]
သြဂုတ်လပိုင်း ၂၀ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈.၈.၂၀၁၉ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၉ ထိ) ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မှ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ထိ) တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် […]
ခင်ပွန်းက မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီး
လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ပျံ့နှံ့လာမှ ဖောက်ပြန်တာ သိရသော ဇနီးအား တလင်တမယားဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်။ ။ ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး မြောက်​ပိုင်းခရိုင်​ တိုက်ကြီးမြို့နယ်​၊ ဥက္ကံမြို့၊ အ​နော်​ရထာရပ်​ကွက်​၊မြသီတာလမ်း၌ နေထိုင်သူ ကိုမျိုးမင်းဝင်းတွင် ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ဇနီးဖြစ်​သူ မစန်းသူဝါ(ခ) အလုံး နှင့်​ တရားဝင် ပေါင်းသင်း​နေထိုင်​လာရာ […]
ပြည်​သူမုန်းတဲ့ သားတို့ဘဝ အသက်​​တွေ​ပေး သက်​​သေပြသွားတာလို့ အ​မေ မငိုပဲနဲ့ဂုဏ်ယူဝင့်​ကြွားစွာပြုံးလိုက်စမ်းပါ
မငိုပါနဲ့အ​မေပြုံးပြလိုက်​စမ်းပါပြည်​သူမုန်းတဲ့သားတို့ဘဝအသက်​​တွေ​ပေးသက်​​သေပြသွားတာလို့ဂုဏ်​ယူဝင့်​စွာကြွားလိုက်​စမ်းပါ​မေ​မေရယ်​ကျဆုံး​လေပြီး​သောပြည်​သူ့ရဲများဂုဏ်​ယူ​လေးစားလျှက်​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မပှေုံးပှလိုကြ​စမြးပါပှညြ​သူမုနြးတဲ့သားတို့ဘဝအသကြ​​တှေ​ပေးသကြ​​သပှသှေားတာလို့ဂုဏြ​ယူဝငြ့​စှာကှားလိုကြ​စမြးပါ​မေ​မရယြေ​ကဆွုံး​လပှေီး​သောပှညြ​သူ့ရဲမွားဂုဏြ​ယူ​လေးစားလွှကြ​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မေပြုံးပြလိုက်​စမ်းပါပြည်​သူမုန်းတဲ့သားတို့ဘဝအသက်​​တွေ​ပေးသက်​​သေပြသွားတာလို့ဂုဏ်​ယူဝင့်​စွာကြွားလိုက်​စမ်းပါ​မေ​မေရယ်​ကျဆုံး​လေပြီး​သောပြည်​သူ့ရဲများဂုဏ်​ယူ​လေးစားလျှက်​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မပှေုံးပှလိုကြ​စမြးပါပှညြ​သူမုနြးတဲ့သားတို့ဘဝအသကြ​​တှေ​ပေးသကြ​​သပှသှေားတာလို့ဂုဏြ​ယူဝငြ့​စှာကှားလိုကြ​စမြးပါ​မေ​မရယြေ​ကဆွုံး​လပှေီး​သောပှညြ​သူ့ရဲမွားဂုဏြ​ယူ​လေးစားလွှကြ​ပါ
မြန်မာလုပ်သားမှ ထိုင်းအလုပ်ရှင်ကို ဘယ်လိုသတ်ခဲ့လဲဆို ပြန်လည် သရုပ်ပြနေသော မြင်ကွင်း (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ဘန်စေ့ အရပ် ၀ုန်စ၀ပ် ၁၉ လမ်း အိမ်နံပါတ် ၄၅၃ မှာနေထိုင်နေသူ ဖုန်စပ် ၀ပ်ထရာနစ်ကို ( ဟီယားယူ) အသက် ၇၂ ကို သတ်ပြီး ဆွဲကြိုးယူ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံသား မင်းထွေး (ခ) ကိုကို […]
ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို လုံးဝ မပြောသင့်၊မလုပ်သင့်တဲ့အရာ(၈)ခု …
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်လို့၊ခင်လို့ လက်တွဲကြတယ်ဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနိုင်လို့ စုံတွဲတိုင်း အနည်းနဲ့အများတော့ ရန်ဖြစ်၊ စိတ်ကောက်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေး တာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တွေဖော်၊ စကားလုံး ရင့်ရင့်သီးသီးတွေ သုံးပြီး စိတ်နာသွားအောင် ပြောပစ်တာ မျိုးက မတူဘူးဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ […]